I-Kaya Beach House Safety Bay- ilungele izinja
Ulwandle lutholakala ekuhambeni kwemizuzu embalwa ekugcineni komgwaqo! Njengoba iyindawo ethandwayo yokutshuza nge-kite "The Pond". Ikhaya lisendaweni engasogwini yeSafety Bay (Rockingham) futhi linikezwe induduzo engqondweni. Kukhona igceke elikhulu elibiyelwe ngemuva elinotshani nezingadi ukuze abantu abadala, izingane nezinja bazijabulele. I-Penguin Island, ukuvakasha kwamahlengethwa namabhishi amahle, izindawo zokudlela kanye nekhefi kusemnyango wakho!
Indlu inekhishi elihlome ngokuphelele elinesitofu segesi esingu-90cm, i-microwave, i-blender, i-rice cooker kanye nemishini yokubhaka uma ungathanda ukushaya ikhekhe! Kukhona ipayipi ngemuva kwendlu uma kwenzeka udinga ukugeza izilwane ezifuywayo, amagiya okusefa njll ohambweni lwakho lokuya ogwini. Kukhona isidlali se-DVD esinohlu olukhulu lwamamuvi ongawathokozela abantu abadala kanye nezingane. Kukhona ne-PS3 enokukhethwa kwemidlalo elungele izingane ezincane nezindadlana. Indlu yokugezela ineshawa nokugeza okuhlukile. Intengo yokuhlala isikhathi eside kunezinsuku eziyi-120 okungaxoxwa ngazo.
4.88(65 okushiwo abanye)
ISafety Bay iyindawo enhle, enobungani nomndeni e-Rockingham. Izilwandle ezinhle, isiqhingi esiyikhaya lamaphengwini amancane, ukuvakasha kwama-dolphin diving kanye nendawo yokuntweza kite "echibini" kusemnyango wethu. Sinezindawo zokudlela ezinhle endaweni (uhambo olude) okufaka phakathi okumnandi kwesiThai (amaJariya), amaNdiya, ama-Mexican, amaFish namaChips, i-Pizza, kanye nomklomelo ozuze u-100% wekhefi ye-gluten mahhala (Bayside Barrista). Kukhona ne-IGA yendawo, usokhemisi, iposi njll.
Ukungena ngebhokisi lokukhiya futhi ngeke sibe khona ukuze sibingelele izivakashi. Asikude kakhulu nokho futhi izivakashi zikhuthazwa ukuthi zisithinte ngocingo uma zinezinkinga.